Maninona no mandeha any Roma | Fitsangatsanganana tanteraka
Fa maninona no mankany Roma? Ho an'ny tantara, ny kolontsaina sy ny sakafo, mazava ho azy! Ankoatr'izay, izy dia iray amin'ireo tanàna mahaliana indrindra sy manankarena indrindra eropeana, ka tsy misy afaka mijanona tsy mahalala, mankasitraka ary mankafy azy io.
Roma dia mahatalanjona ary tsy hay hadinoina. Na dia tanàna kely aza izy io, be dia be ny tolotra omeny ary misy dia lavitra iray ka mamela antsika te hiverina. Ka anio, ho hitantsika maninona no mandeha any Roma mahita ny tsara indrindra omeny antsika.
1 Roma, ilay tanàna mandrakizay
2 Inona no ho hita any Roma
Roma, ilay tanàna mandrakizay
Roma dia anarana manan-danja amin'ny tantaran'ny sivilizasiôna tandrefana ary ny tena manintona ny tanàna dia izany indrindra Lova romanina: toerana iray ahafahanao mahita ny rava sy ny firesahana an'io fotoana io na aiza na aiza. Tsy mitovy ny fanandramana azy voalohany.
Amin'izao fotoana izao dia manana ny tanàna mponina efa ho 3 tapitrisa ary toy izany koa ny tanàna fahatelo be mponina indrindra ao amin'ny Vondrona eropeana. Nandritra ny telo arivo taona nisian'ny tantara, efa lasa lavitra izy io izay namela ny marika amin'ny ladoany sy ny mombamomba ny tanàn-dehibe. Raha tsy manisa ny tanànan'ny Azia isika dia i Roma no tanàn-dehibe voalohany manerantany.
Mijanona ny tanàna eo amoron'ny renirano Tiber ary manana faritra maintso maro izy, havoana malefaka, ala, renirano ary farihy. Ny fon'ny fahagolan'i Roma dia eo amin'ny Havo Seven: Aventine, Palatine, Capitol, Esquiline, Celio, Viminal ary Quirinal. Ny tendrombohitra sasany dia ampiana amin'ireo havoana ireo, ka rehefa mandeha azy io indraindray dia miakatra sy midina ny dia, manome antsika fahitana mahafinaritra.
Inona no azontsika lazaina momba azy Toetran'ny toetr'andro any Roma? Mangatsiaka ny fahavaratra ary efa amin'ny oktobra dia mety manodidina ny 30º C. Mangatsiaka sy orana anefa ny ririnina. Ny lohataona dia vanim-potoana tsara handehanana any Roma satria mamela anao handeha am-pifaliana nefa tsy mijaly noho ny hafanana be. Elo iray raha sanatria ka voavaha ny raharaha.
Inona no ho hita any Roma
Roma dia manana toerana arkeolojika, tsangambato ara-tantara, loharano, arabe mahafinaritra, kianja sy kianja, zaridaina, lapa ... Inona no tianao? Ity no fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao rehefa manomana dia ianao na aiza na aiza. Tsy ny rehetra no mankafy mandevina ny tenany ao amin'ny tranombakoka, misy olona te-hitsidika mavitrika kokoa, ny hafa tia manandrana tsiro vaovao, ny hafa te-hihaona amin'ny olona fotsiny ary mifanerasera.
Raha vantany vao mazava ny momba ny safidinao na ny zavatra tsy tadiavinao, dia azonao atao ny misafidy izay hotsidihana any Roma. Raha tianao ny tantara taloha, avy eo ny tanjona voalohany dia ny Coliseum Romana. Taloha, ity toerana midadasika ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Amphitheater Flavian ary io no trano lehibe indrindra naorina tamin'ny Fanjakana Romanina iray manontolo. Efa ho roa arivo taona izao, 188 metatra ny halavany, 57 metatra ny haavony ary 156 metatra ny sakany.
Ny Colosseum dia nanomboka natsangana teo ambanin'ny governemanta Vespasiano ary vita ambanin'ny an'i Tito, tamin'ny taona 80. Tamin'izany fotoana izany dia olona maherin'ny 50 no tonga nankafy ny seho izay nahitana ady amin'ny gladiatera, famonoana olona ary biby hafakely ary, hono, fananganana ady an-dranomasina.
Nihetsika nandritra ny dimanjato taona izy ary avy eo niharan'ny tsirambina, fandrobana, horohoron-tany ary na dia baomba aza teo am-pelatanan'ny fiainana politika tao Roma sy Italia. Mpizahatany an-tapitrisany maro izao no mitsidika azy io, tombanana ho enina tapitrisa isan-taona, ary hatramin'ny 2007 Izy io dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito amin'ny tontolo maoderina. Misokatra isan'andro izy manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ka hatramin'ny 30 hariva, nefa mihidy amin'ny Krismasy sy ny 7 Janoary. Ny tapakila mitambatra ho an'ny Colosseum, ny Forum ary ny Palatine Hill dia mitentina 1 euro, fa raha eo anelanelan'ny 12 sy 18 taona ianao dia midina hatramin'ny 24 euro.
El Forum Romanina nilaozana izy ary hadino nandritra ny taonjato maro. Nalevina izy io ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao nipoitra tamin'ny fihadiana maoderina. Ny forum no toerana nitrangan'ny fiainam-bahoaka sy ny fivavahana, ka manana harena maro.
eto misy tempoly maromaro, ny Tempolin'i Venus, ny an'ny Saturnus, ny an'ny Vesta, ohatra, fa ho hitanao ihany koa ny Bow of Titna, ho fahatsiarovana ny fandresen'i Roma an'i Jerosalema, ny Andohalambon'i Severinus fahafito tamin'ny taona 203 AD, ny Curia izay niasan'ny Senatera, ny Tombo-kase avy amin'ny taona 608 taorian'i AD mihoatra ny 13 metatra ny haavony, ny Basilica an'i Maxentius sy Constantin, lehibe nefa rava, na ny Via Sacra.
El Palatine mountAmin'ny lafiny iray dia io no toerana nanorenan'ny Roma manan-karena sy nanan-kery indrindra ny trano onenan'izy ireo ary ny sasany amin'izy ireo dia mbola mijanona. Eto dia tsy tokony ho very ianao Domus Flavia, ny trano ofisialin'ny Emperora Domitian, ny Tranon'i Livia miaraka amin'ny mozaika sy ny sisiny, ny Trano Augustus, misy ambaratonga roa, ny Fifaninanana hazakazakana, ny zaridaina Farnese ary ny Museum an'i Palatine.
Toerana hafa inona no tokony hitsidihantsika an'i Roma? Tsy ho foiko ilay tsara tarehy Fandroana an'i Caracalla. Etsy ankilany, ao anatin'ny Kristiana Roma dia azonao atao ny mitsidika ny Vatican, la Kianja St. Peter, Basilica St. Peter, ny tranombakoka Vatikana ary ny fiangonana Sistine. Also the Castel Sant'Angelo miaraka amin'ny tetezana romana tsara tarehy.
Mazava ho azy, amin'ireo toerana rehetra ireo dia matetika misy olona marobe, noho izany ny zavatra rehetra dia hiankina amin'ny fahaliananao hahalala azy ireo. Na izany aza afaka mivezivezy amin'ny fitateram-bahoaka ianao Izaho dia mandrisika mandeha. Kely Roma, mora ny tsy very ary raha very ianao ... inona no mitranga?
Ny mandeha an-tongotra dia mamela anao hahafantatra ny sasany amin'ireo kianja tsara tarehy indrindra eto an-tany toy ny Kianja Navona, San Pedro na ny Kianja Espaniola. Ho tonga ihany koa ianao amin'ny Tsangambato ho an'i Victor Emmanuel II, ny mpanjaka voalohany niraisan'i Italia, ary ny Kianja Campidoglio.
Raha satria mpivavaka ianao, na satria tia maritrano sy kanto masina dia tianao ny fiangonana, dia holazaiko aminao izany any Roma dia misy fiangonana sy basilicas maro TENA Ny ankafizin'ny fizahantany dia Santa María Concepción, San Clemente, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán ary San Pablo ivelan'ny rindrina.
Marika iray hafa an'i Roma ny Trevi Fountain. Naverina tamin'ny laoniny, nikatona kely vetivety, fa efa ao anaty voninahiny rehetra. Toerana iray hafa izay hitanao fa mandeha dia ny Pantheon an'i Agrippa, miorina eo alohan'ny kianja kely ahafahanao mijanona misotro kafe na zava-baovao. Tianao kely marary? Manana ny Catacombs (Domitila, Priscila, Santa Inés, San Calixto ary San Sebastián).
Heveriko fa momba azy io zarao ho Roma Imperial, Romana Kristiana, Romana Museum ary Roma malalaka ny fitsidihana an'i Roma. Mazava ho azy, miaraka amin'ny fotoana bebe kokoa dia afaka manao zavatra bebe kokoa ianao, eny fa na dia an-tongotra sy mandeha aza nefa tsy manao zavatra manokana, zavatra amporisihiko foana.
Raha liana ianao, manaova farany fitsangatsanganana antoandro Azonao atao ny mahafantatra ny sasany amin'ireo villa kanto amin'ny manodidina toy ny East Villa o Hadrian's Villa ary efa somary lavitra, Ostia Antica.
Fomba tsara fitehirizana, raha te hahalala be dia be dia ny mividy ny Roma Pass na ny Karatra OMNIA Vatican & Rome. Samy manome fihenam-bidy amin'ny fizahantany isan-karazany ary mamela ny fampiasana fitateram-bahoaka ao an-tanàna. Ny voalohany dia misy dikanteny roa, roa na telo andro, ary ny vidiny, ny roa andro 32 euro isaky ny olon-dehibe ary ny telo, 52 euro. Ny faharoa kosa mitentina 113 euro isaky ny olon-dehibe. Tokony ampitahanao izay mahasarika ny tsirairay sy ny safidiny.
Farany, ny Gastronomia romana Tsara izany ary isaky ny fiatoana amin'ny fitsangatsangananao dia hiaraka amin'ny gilasy, pizza, paty lovia, labiera vaovao, ary izay tianao. Araka ny hitanao, ny fanontaniana ny maninona no mandeha any Roma Betsaka ny valiny azo atao nefa azo antoka ny zavatra iray: tsy handiso fanantenana anao velively i Roma ary manome toky anao aho fa te hiverina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Maninona no mandeha any Roma
Inona avy ireo Hamptons any Etazonia